UROGER FEDERER UMDLALO OLANDELAYO | NGABE UFEDERER UDLALA NINI NGOKULANDELAYO EWIMBLEDON? -RADIO TIMES - INTENETYA
URoger Federer udlala nini ngokulandelayo eWimbledon 2021? Iinkcukacha zomdlalo olandelayo ziveziwe
Ngelixa uNovak Djokovic iseyintandokazi yokuphumelela iWimbledon 2021, olona tshaba lwakhe luphambili URoger Federer iyakhula ngamandla kwaye isombulule njengoko itumente iqhubeka. Wenze umsebenzi olula kumjikelo wakhe wesine ngokuchasene nembewu engu-23 u-Lorenzo Sonego kwaye uza kuba nethemba lokuphumelela ngokufanayo kwikota yakhe yokugqibela.
UFederer akazi ukuba ngubani oza kudlala okwangoku, njengoko uNombolo 2 wembewu uDaniil Medvedev kusafuneka agqibe ukungqubana kwakhe noHubert Hurkacz. Ezi ziindaba ezimnandi kwinkwenkwezi yaseSwitzerland - ayizukuxhamla kuphela kumchasi wayo kusuku lokuphumla, kodwa kukwakho nethuba lokuba uMedvedev otyhafileyo usendlwini yoloyiso lokothuka, njengoko imida yomdlalo isiya kwiiseti ezintlanu. Oku kuya kuba sisiqabu kuFederer, onembewu yesithandathu.
Ngesihloko sesithoba seWimbledon, kwaye yimidlalo emithathu kuphela esele idlalwe, uFederer kuya kufuneka azigcine epholile, kodwa uya kwikota yokugqibela njengoyena mntu amthandayo, nokuba ujongene nabani na.
Funda zonke iinkcukacha zomdlalo olandelayo kaFederer eWimbledon.
URoger Federer udlala nini ngokulandelayo eWimbledon?
UFederer uyaqhubeka nokubhida kwakhe isihloko seThoba seWimbledon ngomso, ngoLwesithathu we-7 kaJulayi . Umdlalo kungenzeka udlalwe kwiNkundla yeZiko, kodwa oku kusafuneka kuqinisekisiwe kwaye asikabinalo ixesha lokuqalisa okwangoku.
UFederer uzakudlala ophumeleleyo kaDaniil Medvedev vs Hubert Hurkacz, ophazanyiswe yimvula kwaye ugqibezela kwiNkundla yeNkundla ngo-1: 30 ngokuhlwa namhlanje.
UFederer uzama ukuphumelela inqaku lakhe le-21st grand slam, ukumkhupha phambi kukaRafael Nadal ekumeni, kodwa ujongene nomzabalazo onzima, kwaye ngokuqinisekileyo akatyibiliki ngokulula njengoyimbangi yakhe, intshatsheli elawulayo uNovak Djokovic.
Inkwenkwezi yaseSwitzerland eneminyaka engama-39 kunye nomSerbia oneminyaka engama-34 ubudala bakwelinye icala Ukuzoba iWimbledon 2021 kwaye ujonge ukuseta olunye udidi Iwimbledon yokugqibela , Ingayimpinda yokubonisa ukubethelwa kwezikhonkwane ngo-2019.
Ukugquma kweWimbledon kusasaza yonke imihla kwi-BBC One, i-BBC ezimbini kunye ne-BBC Red Button, ngoku namhlanje kugubungela i-10: 30 kusasa kwi-BBC yesibini. Ukufumanisa ukuba yintoni enye ekhoyo, jonga i-TV yethu uG uide. Ndwendwela indawo yethu yeMidlalo ngazo zonke iindaba zamva nje.
phezulu kwechibi series 2
bbc ngokungqongqo yiza idanisa ivoti
iqala ngabani ixesha igrandprix namhlanje
eyona nombolo yengelosi